काभ्रेमा अक्सिजन उत्पादन पुग्दो छ ? (भिडिओ) – मिलिजुली खबर
in गृहपृष्ठ, ट्रेडिङ, फिचर, समाचार, समाज, स्वास्थ्य
२८ बैशाख, धुलिखेल: काभ्रेमा कोरोना भाईरसको दोस्रो लहरबाट संक्रमित हुनेको संख्या पछिल्लो केहिदिन यता १ सय भन्दा माथि छ । दैनिक जसो मृतकपनि थपिदैन छन् । कोरोना भाईरसको दोस्रो लहर पहिलो चरणको जस्तो नरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
अहिले अस्पतालमा अधिकांश संक्रमित शरीरमा अक्सिजनको मात्रा निकै कम भएपछि मात्रै पुग्ने गरेका छन् । दैनिक १ सय जना भन्दा बढी संक्रमित थपिँदा जिल्लामा अक्सिजन अभाव हुने त होईन भन्ने चिन्ता आम नागरिकमा देखिएको छ । काभ्रेमा अक्सिजन अर्को ठाउँबाट ल्याउनु पर्दैन, अक्सिजन उत्पादन गर्ने कम्पनी नै काभ्रेमा छ ।
एउटा कम्पनी नै काफी
पनौती नगरपालिका–५ ढलमलेमा रहेको नवज्योति ग्यास प्रालिले अक्सिजन उत्पादनको काम गर्दै आईरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी एंव जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसीसीएमसी) काभ्रेका संयोजक शिवराम पोखरेले भन्नु हुन्छ ‘यो कम्पनीबाट उत्पादन भएका अक्सिजनले काभ्रे जिल्ला मात्रै होइन भक्तपुर र काठमाडौँलाई पनि धान्छ । प्रजिअ पोखरेलका अनुसार अक्सिजनको अभाव हुँदैन । सिलिण्डरको समस्या आउन नदिन कम्पनीसँग छलफल गरिसकेका छौ । कम्पनीसँग सुरूमा १३ हजार भन्दा बढी सिलिण्डर थियो तर अहिले रिफिलिङ गर्न जम्मा ७ हजार मात्रै आउने गरेको छ । ‘हामीले कम्पनीलाई सबै सिलिण्डर खोज्न र तयारी अवस्थामा राख्न भनेका छौँ, अनि अर्को कुरा आफुलाई चाहिँयो भन्दै कम्पनीमै लिन पुग्नेलाई पनि अस्पतालले पढाएको कागजपत्र हेरेर मात्रै दिन कम्पनी सञ्चालनलाई भनेका छौँ, किन भने सबैले अक्सिजन घरमै जोहो गर्न थाल्नुभयो भने त अर्को संकट आउँछ, प्रजिअ पोखरेलले भन्नुभयो ।’
अनुगमन टोलीले अक्सिजन भर्न बजारबाट आउने सिलिण्डर कुनै पनि बेला भरेर पठाईदिन निर्देशन दिएको छ । अहिले यो कम्पनीमा सेनाको प्रविधिक टोलीले अक्सिजन उत्पादनमा सघाई रहेको छ । यसअघि कम्पनीका दुई जना अपरेटर मात्रै थिए ।
काभ्रेका दुई ठूला अस्पताल धुलिखेल र शिर मेमोरियल अस्पताल बनेपामा गरि दैनिक करिब १५० को हाराहारीमा मात्रै खपत हुने गरेको कम्पनी सञ्चालक प्रकाश थापाले बताउनुभयो । उहाँ अनुसार कम्पनीमा कम्पनी अहिले २४ सै घण्टा सञ्चालनमा छ ।
कम्पनीमा बजुलीको समस्या !
अनुगमनमा पुगेको टोलीलाई सञ्चालकले बिजुलीको समस्या रहेको बताए । लगत्तै काभ्रे बिद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई उक्त अक्सिजन कम्पनीमा कुनै पनि बेला बिजुली आपुर्ति बन्द नहुने वातावरण बनाउन आफुले आग्रह गरिसकेको प्रजिअ पोखरेलले बताउनुभयो ।
जिल्लामा कुनै पनि बेला अक्सिजनको अभाव सिर्जना नहोस् भनेर सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षलाई उच्च सतर्कताका साथ राखिएको प्रजिअ पोखरेलले बताउनुभयो । अक्सिजन कम्पनीको सुरक्षा जिम्मा नेपाल प्रहरीको
पनौती नगरपालिका वडा नम्बर ०५ मा रहेको नबज्योति ग्यास प्रा.लि. (अक्सिजन उत्पादन) कम्पनीको सुरक्षा जिम्मा नेपाल प्रहरीले लिएको छ । काभ्रे प्रहरीको टोली कम्पनीमा २४ सै घण्टा खटिने छ । बजारमा अक्सिजनको हाहाकार भईरहेको र धेरै विरामीका आफन्त अक्सिजन लिन कम्पनीमै पुग्ने गरेका कारण कम्पनीको सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरी खटिएको हो ।
मेथिनकोट अस्पतालको इमरजेन्सी बाहेक सम्पूर्ण सेवा अनिश्चित कालका लागि बन्द
गोकुल बाँस्कोटाले भने 'माधव नेपाललाई कारबाही गर्न हतार नगरौ'